Halbeegga Guddiga Biyo-La'aanta La Beddelay: baaxadda: 980mm dhumucdiis: 2.5mm Length: 2m & / sida ku cad macaamiisha dalab lambarka mowjadda: 7 dherer dherer ah: 24mm mawjadaha hirarka: 70mm Amarka Tilmaamaha: 1. Tixraac-Xirfad-yaqaan. 2. Xaqiiji qiimaha & tirada, waqtiga hogaaminta, naqshada, muddada bixinta iwm.
Qolka jiifka wuxuu noqon karaa lebensraum muhiim u ah nolosheena. in qaab dhismeedka qolka jiifka uu raqiis yahay iyo inkale waxay saameyn ku yeelan kartaa heerka nasashada dadka, ka dib taabashada nolosha dadka, shaqada iyo waxbarashada. sidaa darteed si kastaba ha noqotee waa in qolka jiifka loo qaabeeyaa mar la cusbooneysiiyo ...
Biyuhu SPC vinylalkohol sagxadda Shiinaha
Gogosha SPC waa casriyayn ka sameysan alwaaxda vinylka raaxada leh, Waa mid qaas ah oo loogu talagay nidaamka iskuxidhka guji. 100% walax bikrad ah. SPC gogosha vinylalkohol waa mid aad u waara, oo leh iska caabin aad u sareysa oo ka dhan ah jeexjeexyada iyo xagashada, taas oo ah arrin weyn oo leh sagxad adag oo alwaax ah Well rakibay iyo adeq ...
Tile Saqafka jiingado
Taleefada jiingada ah ee jiingadsan waxay ka kooban tahay cimri dherer aad u sareeya oo deegaanka dabiiciga ah ah. Faa'iidooyinka: Midab muddo dheer soconaya (ugu yaraan 10 sano) Wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay cimri dherer dabiici dabiici ah ...
Soosaaraha Maqaarka Guryaha Saqafka ee Sileetikada
Muusigeena dardaaranka saqafka ah ee Guryaha lagu isticmaalo waxaa badanaa laga isticmaalaa beeraha warshad villa iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay biyuhu, adag, kulaylka, daxalka u adkaysta, dabaysha, anti-naxdin, anti-baraf, cagaaran iyo deegaanka u fiican. Codsiga: daadinta, gawaarida, garoomada, villa, tuulooyinka fasaxa, abaabulka ...
Tile saqafka jiingado for sale
Tile-ka saqafka ah ee jiingadda ah waxaa lagu horumariyay iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda casriga ah ee caalamiga ah Waa qalab si gaar ah loogu talagalay saqafka loogu talagalay warshadaha waxsoosaarka waxsoosaarka waxsoosaarka leh iyo meelaha roobabku aysiidhka ku badan yihiin. Lakabka koowaad: Waa nooc ka mid ah cusbi oo leh iska caabin cimilo ka sarreysa. Sababtoo ah ...
Gudiga PVC Qurxinta Jumlada
Faahfaahinta Gudiga PVC Qurxinta: Faahfaahinta: Baaxadda (cm): 10,16,18,20,25,30,40,59.5,60,60.3 ama Adkaanta Qaaska ah (mm): 5,6,6.5,7,7.5,8, 8.5,9,10,11,12 ama Length Customized: 2.97m, 5.8m, 5.95m ama Customized PVC Content: 35% - 75% Miisaanka: 1.5KG - 5.0KG halkii Fagaare Xusuus: Dhammaan dalabyada waxay noqon karaan ...
Biyo-biyuhu WPC Vinyl Gogosha Iibinta
Faa'iidada WPC Vinyl Gogosha aan faa'iido lahayn: Eco-saaxiibtinimo: Wax sun ah ma leh, Formaldehydeless, Waa bilaa biro culus, Ma jiro xaalad kacsan oo milmi kara. Caafimaadka leh: Bakteeriyada ka hortagta, Mouldproof, Anticorrosiion, Udgoon lahayn. Ammaan ah: non-simbiriirixan, Anti-ma guurto ah, biyaha-aan caddayn, dab-caddayn. Raaxo leh: Joogtaynta heerkulka, ku habboon e ...
Gudbiyaha Jumlada PVC
guddiga darbiga PCV-ga: Wareegtada derbiga PCV-ga oo dhan 20cm-60cm, dhumucdiisuna 6mm-10mm waxay leeyihiin tayo wanaagsan oo kala duwan, u dhoofinta UK, USA, EUR. 1) Dusha sare ee dhalaalaya, jilicsan 2) Noocyada kala duwan ee midabada iyo qaababka 3) Isdhexgalka sare, iska caabi corrode, waqtiga nolosha dheer, fudud in la ilaaliyo 4) Caafimaad qab iyo xasad leh, 5) Si ballaaran loo isticmaalay ...
Iibinta Tile Roofing Trapezoidal Online
ASA marmarka xarkaha dardaaranku waxay korsadaan tikniyoolajiyad casri ah oo sedex lakab ah. Waxay leedahay caabbinta daxalka oo aad ufiican, kuleylka kuleylka, iska caabinta saameynta taas oo siineysa xaashidayada saqafka ASA oo leh xasilooni midab ah oo muddo dheer ah iyo nolol adeeg dheer leh. 10 sano midab majiro, 25-30years cimri dherer ah. Iyadoo ...